> Resource > Ladnaansho > XLSX Recovery: Ladnaansho tirtiray ama formatted XLSX Files in 3 Talaabooyinka
Waxaan soo kaban karto, My Excel XLSX Files?
Hi, waxaan tirtiray file XLSX ganacsi shalay oo aanan wax gurmad on my computer. Waxaan baadhay meel kasta oo aan computer, laakiin waxba kama heli. Waxaan la yaabanahay waa hab loogu talagalay in ay i bogsii aan tirtiray file XlSX. Waxaan idin tusayaa kuu mahad aan daacad ah haddii qof ku caawin kara. Best xiriira.
Maalmahan, users la buugan Excel si joogta ah u shaqeeyo waxaana ay mar walba illoobin in la sameeyo gurmad. Waxaa laga yaabaa inaad lumiso file XLSX sababta oo ah tirtirka qaldan, nidaamka shil, weerar virus ama sababo kale. Marka file XLSX aad lumo, aad u malaynayso in aad fursad u lahayn in ay u soo ceshano. Dhab ahaantii, XLSX ku soo gudbin aad tirtiray aan weligood laga badiyay, xaq baad ku tahay awoodin inay helaan. Iyadoo XLSX software soo kabashada, weli waxa aad dib u heli kartaa.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa Excel xal kabashada xogta sida inuu ka soo kabsado aad laga badiyay, tirtiray ama xataa formatted Excel XLSX iyo XLS files. Waxaa si buuxda la jaan qaada computer, drive dibadda adag, kaydinta USB, kaadhka xusuusta iyo qalabka kale ee lagu kaydiyo.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery iyo bilowdo kabashada XLSX hadda.
3 Talaabada inuu ka soo kabsado Khasaaray / tirtiray / formatted XLSX / XLS File
Ka hor inta soo kabashada, waxaa jira hal wax oo aad u baahan tahay si ay u daryeelaan oo ku saabsan: Fadlan joojiya gelinaya xogta galay folder asalka ah ee taas laga badiyay file XLSX ama joojiso isticmaalka qalab aad kaydinta tan iyo faylka XLSX lumay waa laga badiyay. Haddaba u fuliyaan dib u soo kabashada la Windows version of Wondershare Data Recovery. Users Mac fadlan kala soo bixi version Mac ah.
Tallaabada 1 Run Wondershare Data Recovery iyo Select Recovery Mode
Halkan waxaa lagu siin doonaa 3 hababka soo kabashada inuu ka soo kabsado file XLSX aad. Aan isku dayno "lumay Recovery File" hab wada. Haddii hab uusan kaa caawin, waxaad isku dayi kartaa laba kale hababka soo kabashada markaas.
Fiiro gaar ah: Sida aad ka arki kartaa interface ah, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u joojiyaan scan iyo badbaadin ama sii natiijada iskaanka waqti kasta oo aad rabto in aad ka.
Tallaabada 2 Dooro Hard Drive in baarista lumay XLSX File
Barnaamijku waxa uu soo bandhigay doono oo dhan qoruhu iyo qalab lagu kaydiyo dibadda on your computer. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ku haboon in baarista file XLSX lumay oo guji "Start" in ay sii wadaan.
Fiiro gaar ah: Waxaad "Enable Deep Scan" kartaa natiijo iskaanka fiican, laakiin waxa ay qaadataa waqti dheer oo ka badan scan caadiga ah.
Tallaabada 3 Ladnaansho XLSX Files Xulo
Marka scan la sameeyo, dhammaan faylasha helay xijaab aad diirada lagu soo bandhigi doonaa in qaybaha iyo waddooyinkiisa. Waxaad u sheegi kartaa in files XLSX helay waa waxa aad rabto inuu ka soo kabsado ama aan ka magacyadooda.
Ka dib markii xulashada kuwa aad rabto inuu ka soo kabsado, aad haatan riixi kartaa "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado xogta overwriting mar kale, fadlan badbaadin XLSX ka soo kabsaday soo gudbin si xijaab cusub.
Siduu u SimpleTech Data Recovery